नसोच्नेगरी बजारमा ह्वात्तै घट्यो आलुको मुल्य,हेर्नुहोस कति पुग्यो? - Nepali in Australia
October 11, 2020 autherLeaveaComment on नसोच्नेगरी बजारमा ह्वात्तै घट्यो आलुको मुल्य,हेर्नुहोस कति पुग्यो?
सोच्नै नसकिने गरि घट्यो आलुको मुल्य ! आलुको ब्यबसायी खेती हुदा उत्पादनमा बृद्धि हुनु र नयाँ आलु बजारमा आएसँगै मुल्य घटेक हो । हुम्लामा आलुको मुल्य सस्तिएको छ ।
दुलहीको बुवा र २ भाई हत्कडी सहित विवाहमा आएपछि…
October 13, 2020 auther